VisCircle: Gaa n'ihu Ngwaahịa Ecommerce ngwaahịa gị na Teknụzụ 3D | Martech Zone
Nmeputa ohuru ohuru abụrụla uru nke obodo anyị na ọtụtụ ubi na ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ. Otu ohuru ecommerce bụ iji teknụzụ 3D. Mmachi nke web (n'oge a) bụ ikike iji nweta ahụmịhe zuru oke dịka anyị na-eme n'ime mmadụ na ụlọ ahịa azụmaahịa.
Ruo mgbe a na-anabata AR na VR, ahụmịhe kachasị emetụta ma na-adọrọ mmasị bụ ikike ịlele ngwaahịa nke ọma na ntanetị ebe ị nwere ike ịtụgharị ma bugharị ngwaahịa ahụ iji hụ akụkụ ya niile. Mgbe m na-azụta ụda maka ebe anyị na-eme ihe na nso nso a, enwere m ike ịgbagharị na mbugharị na ntinye iji hụ na ọ dakọtara na ngwa ndị ọzọ anyị nwere. Nke ahụ dị mfe karịa ịkpochapụ site na mpempe akwụkwọ ozi ngwaahịa!
Kedu ihe bụ 3D Configurator?
Ihe nhazi 3D bu ihe eji eme ka ndi ahia gi gosiputa ngwa ahia gi n’akuku nile. Ọ ga - enyere ndị ahịa gị aka ịhazi ngwaahịa gị ozugbo na mmekọrịta. Ezigbo oge 3D Configurator bụ ngwa ọrụ nwere ike ịbawanye ọnụego ntụgharị na weebụsaịtị gị. Usoro ahia 3D a na-enye ndị ahịa ohere inyocha ma hazie ngwaahịa na ezigbo oge. Achọpụtala mmekọrịta 3D iji melite ma ndị ahịa na mmekọrịta yana - n'ikpeazụ afọ ojuju. Site na ịbawanye nyocha nke nyocha, ị nwere ike belata nloghachi niile na ahịa ndị ahịa.
VisCircle - Conflọ ọrụ 3D Configurator
VisCircle bụ ezigbo oge 3D Configurator na-eweta. Ma ị na-ere mgbanaka agbamakwụkwọ, ihe ndina, ụgbọ ala, arịa ma ọ bụ mkpịsị odee, ha nwere ike ịmekwu mmekọrịta na ịma mma. Uzo ha na enyere ndi oru ahia aka ichikota otutu ndi ozo, ihe ndi ozo, na njirimara nke ngwaahịa iji mee ka ndi mmadu gbanwee.
The Onye nhazi 3D nke VisCircle nyere na sistemụ niile a na - ahụ anya gụnyere Windows, Mac OS, Android, iOS yana kwa n’ihe nchọgharị dịka Google Chrome ma ọ bụ Firefox. Nke a bụ ezigbo ihe atụ: